အင်ဂိုလာ အာဗန်တီ - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်ဂိုလာ အာဗန်တီ(ပေါ်တူဂီ: "Angola Avante"အင်္ဂလိပ်: "Onwards Angola", lit. '"ရှေ့သို့ အင်ဂိုလာ"')သည် အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။ ဟူအီ အယ်ဘက်တို ဗီအေရာ ဂျီအက်စ် မင်ဂက်စ်မှ တေးသွားကို သီကုံးခဲ့ပြီး မန်နျူရယ် ဟူအီ အယ်ဗီစ် မွန်တီရိုမှ စာသားကို ရေးစပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းသည် ပေါ်တူဂီတို့ထံမှ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်၍ လာခဲ့သည်။ သီချင်းစာသားထဲတွင် လွတ်လပ်ရေးရစဉ်မှစ၍ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ တစ်ပါတီတည်း ကြီးစိုးခဲ့သည့် အင်ဂိုလာလွတ်မြောက်ရေးပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုပါတီ၏ အရေးပါသော ဖြစ်ရပ်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။
English: 'Onwards Angola'
မန်နျူရယ် ဟူအီ အယ်ဗီစ် မွန်တီရို၊ ၁၉၇၅
ဟူအီ အယ်ဘက်တို ဗီအေရာ ဂျီအက်စ် မင်ဂက်စ်
၁.၁ အဆိုပြုသော ပြောင်းလဲမှုများ
၂ စာသား စကားစပ်များ
၃.၁ ပေါ်တူဂီ (တရားဝင်ဘာသာစကား)
၃.၂ ကီကွန်ဂို (အမျိုးသားဘာသာစကား)
"အင်ဂိုလာ အာဗန်တီ"ကို ဟူအီ အယ်ဘက်တို ဗီအေရာ ဂျီအက်စ် မင်ဂက်စ်မှ ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ စာရေးဆရာများသမဂ္ဂနှင့် အနုပညာရှင်နှင့် တေးရေးဆရာများသမဂ္ဂတို့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော ဟွန်ဘိုမြို့(Huambo)၌ ပညာသင်ကြားနေသည့် စာရေးဆရာ မန်နျူရယ် ဟူအီ အယ်ဗီစ် မွန်တီရိုမှ စာသားကို ရေးစပ်ခဲ့ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကောက်ယူခဲ့သော တရားဝင်မဟုတ်သော စစ်တမ်းများအရ မြို့တော် လုအန်ဒါတွင် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးသော စာရေးဆရာများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဤသီချင်းကို နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အပိုဒ်ခွဲ ၁၆၄ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သီချင်းစာသားများထဲတွင် အင်ဂိုလာလွတ်မြောက်ရေးပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုပါတီ၏ အရေးပါသော အဖြစ်အပျက်များကို ရည်ညွှန်းသော စာသားများ ပါဝင်သည်။ သို့ပေမယ့်လည်း ၁၉၉၂ ခုနှစ် တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားချိန်တွင် ဤစာသားများသည် အသုံးမဝင်တော့သော သရုပ်ဖော်မှုများဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသော အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများဖြင့် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမယ်လည်း မည်သည့်အရာမျှ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမလာခဲ့ပဲ နိုင်ငံတော်သီချင်းသည် မပြောင်းလဲပဲ ရှိ၍နေသည်။
"Angola Avante" ထဲမှ သီချင်းစာသားများသည် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူများအား အနာဂတ်တွင် ရှေ့သို့ တိုးတက်ကြလိမ့်မည်ကို သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းထားသည်။ The Daily Telegraph သတင်းစာမှ သတင်းစာဆရာ အီဗန် ဟီးဝပ်ထ်မှ အမျိုးအစားခွဲခြားခဲ့ရာ စစ်သီချင်းသံသည် "La Marseillaise" သီချင်း၏ လွှမ်မိုးမှုရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
𝄆 Honramos o passadoea nossa História,
Construindo no Trabalho o Homem novo. 𝄇
Levantemos nossas vozes libertadas,
Para glória dos povos Africanos,
Marchemos combatentes Angolanos,
Solidários com os povos oprimidos,
𝄆 Orgulhosos lutaremos pela Paz,
Com as forças progressistas do mundo. 𝄇
[ˈɔ ˈpatɾjɐ | ˈnũkɐ ˈmajz ɨʃkɨsɨˈɾemuʃ]
[uz iˈɾɔjʒ du ˈkwatɾu dɨ fɨvɨˈɾɐjɾu ǁ]
[ˈɔ ˈpatɾjɐ | ˈnɔʃ sawˈdɐmuz uʃ ˈtewʃ ˈfiʎuʃ]
[tõˈbaduʃ ˈpeɫɐ ˈnosɐ ĩdɨpẽˈdẽsjɐ ‖]
𝄆 [õˈɾɐmuz u pɐˈsadu jɐ ˈnosɐ iʃˈtɔɾjɐ |]
[kõʃtɾuˈĩdu nu tɾɐˈbaʎu u ˈɔmẽj̃ ˈnovu ‖] 𝄇
[ɐ̃ˈgoɫɐ | ɐˈvɐ̃tɨ ‖]
[ʁɨvuɫuˈsɐ̃w | ˈpeɫu puˈde(ɾ) pupuˈɫa(ɾ) ‖]
[ˈpatɾjɐ uˈnidɐ | ɫibɨɾˈdadɨ |]
[ˈũ ˈsɔ ˈpovu | ˈumɐ ˈsɔ nɐˈsɐ̃w ‖]
[ɫɨvɐ̃ˈtemuʒ ˈnosɐʒ ˈvozɨʒ ɫibɨɾˈtadɐʃ |]
[pɐɾɐ ˈgɫɔɾjɐ duʃ ˈpovuz ɐfɾiˈkɐnuʃ |]
[maɾˈʃemuʃ kõbɐˈtẽtɨz ɐ̃guˈɫɐnuʃ |]
[suɫiˈdaɾjuʃ kõ uʃ ˈpovuz opɾɨˈmiduʃ |]
𝄆 [oɾguˈʎozuʒ ɫutɐˈɾemuʃ ˈpeɫɐ ˈpaʃ |]
[kõ ɐʃ ˈfoɾsɐʃ pɾugɾɨˈsiʃtɐʒ du ˈmũdu ǁ] 𝄇
E nsi'eto, katulendi kubavilakana ko
N'nûngi mya kya n'nya kya ngond'a n'zole.
E nsi, kûnda tukûndânga bana baku
Bazîmbana mu diambu dya kimpwânza kyeto.
𝄆 Zitisa tuzitisânga mavioka ye kinkulu kyeto,
Mu salu kyeto, tunga tutungânga muntu’a mpa. 𝄇
Ngola, nda kuntwala!
Nsobolo muna lendo kya n'kangu!
Nsi'a vukana, (muna) kimpwanza!
Nkang'umosi, n'toto mosi!
Tutumbula ngolo ndinga zeto zayambulwa
Mu dyambu dya nkangu mya Afrika.
Makesa ma Ngola, diata tudiata
Muna kintwadi ye nkangu mina mu kinkole.
𝄆 Yinga, mu yadisa ngemba, nwana tunwana mvita
Vamosi ye ngolo zawonso za ntomosono ya nza. 𝄇
/e nsijetɔ | katuleⁿdi kubaʋilakana kɔ/
/n̩.nuːŋi mʲa kʲa n̩.nja kʲa ŋɔⁿda n̩zɔle ǁ/
/e nsi | kuːⁿda tukuːⁿdaːŋa bana baku/
/baziːᵐbana mu djaᵐbu dja kimpwaːⁿza kʲetɔ ǁ/
𝄆 /zitisa tuzitisaːŋa maʋjɔka je kinkulu kʲetɔ |/
/mu salu kʲetɔ | tuŋa tutuŋaːŋa muntuwa mpa ǁ/ 𝄇
/ŋɔla | ⁿda kuntwala ǁ/
/nsɔbɔlɔ muna leⁿdɔ kʲa n̩kaŋu ǁ/
/nsija ʋukana | (muna) kimpwaⁿza ǁ/
/ŋkaŋumɔsi | n̩tɔtɔ mɔsi ǁ/
/tutuᵐbula ŋɔlɔ ⁿdiŋa zetɔ zajaᵐbulwa/
/mu djaᵐbu dja ŋkaŋu mʲa aːfrika ǁ/
/makesa ma ŋɔla | djata tudjata/
/muna kintwadi je ŋkaŋu mina mu kiᵑkɔle ǁ/
𝄆 /jiŋa | mu jadisa ŋeᵐba | nwana tunwana ᵐʋita/
/ʋamɔsi je ŋɔlɔ zawɔnsɔ za ntɔmɔsɔnɔ ja ⁿza ǁ/ 𝄇
Oh Fatherland, we shall never forget
Oh Fatherland, we salute your children
𝄆 We honour the past and our History,
As by our work we build the New Man. 𝄇
Revolution through the power of the People:
For the glory of the peoples of Africa.
𝄆 We shall fight proudly for Peace
Along with the progressive forces of the world. 𝄇
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Angola။ The World Factbook။ CIA။
↑ Rui Alberto Vieira Dias Mingas။ Naxos.com။ Naxos Records။
↑ ၃.၀ ၃.၁ James၊ W. Martin (May 5, 2011)။ Historical Dictionary of Angola။ Scarecrow Press။ p. 170။ ISBN 9780810874589။
↑ Angola Country: Strategic Information and Developments။ International Business Publications။ March 20, 2009။ p. 182။ ISBN 9781438701677။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Minahan၊ James (December 1, 2009)။ The Complete Guide to National Symbols and Emblems: Volume 2။ Greenwood Press။ p. 776။ ISBN 9780313345005။
↑ Savimbi၊ Jonas။ "Lessons learned in Angola"၊ July 9, 1995၊ စာ- B4။
↑ Power, Marcus (2012). "Angola 2025: The Future of the 'World's Richest Poor Country' as Seen throughaChinese Rear-View Mirror". Antipode 44 (3). doi:10.1111/j.1467-8330.2011.00896.x. (စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်သည်)
↑ Hewett၊ Ivan။ "National anthems – must we hear more of them?"၊ July 26, 2011။
↑ Hino Angolano။ 29 July 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Anexo III – Hino Nacional, "Angola Avante"။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Angola National Anthem Lyrics။
↑ Transcription was derived from https://european-portuguese.info/ipa# with slight adjustments.
↑ Hino nacional de Angola em Kikongo (in pt) (2016-10-16)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဂိုလာ_အာဗန်တီ&oldid=679581" မှ ရယူရန်
၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။